Ra’iisal Wasaare Khayre oo balan qaaday qofkii lagu helo musuq maasuq inuu tallaabo ka qaadayo | Baydhabo Online
Ra’iisal Wasaare Khayre oo balan qaaday qofkii lagu helo musuq maasuq inuu tallaabo ka qaadayo
Ra’iisal Wasaaraha cusub ee Somaliya Xasan Cali Khayre, ayaa balan qaaday inuu tallaabo cad ka qaadi doono qofkii lagu helo musuq maasuq oo ka tirsan dowladda Federalka Somaliya.
Xasan Cali Khayre ayaa sheegay nooca uu doono ha noqdee ama mansab kasta dowladda haku lahaado ruuxii ay ku cadaato ku kicida falal musuq maasuq ah in si sharciga waafaqsan Xukuumadiisa ay uga qaadi doonto tallaabo adag.
Waxa uu sheegay dadka oo dhan inay u sinnaan doonaan sharciga, islamarkaana qofka aanan lagu tixgelinayn xilka uu ka haayo dowladda, maadaama uu sharciga ka weyn yahay.
“Waxaan balan qaadi doonaa qofkii lagu helo falal musuq maasuq ah laga qaadi doono tallaabo sharci ah, mana jiri doono shaqsi sharciga ka sareeyo, taasina waxaad ku arki doontaan in dhamaan umaddoo dhami ay u sinaan doonto sharciga hortiisa, iyadoo cidna aanan looga haybaysan doonin xilka ama mansabka dowladeed ee dalka uu u haayo.” Ayuu yiri Ra’iisal Wasaaraha cusub.
Inkastoo Ra’iisal Wasaare Khayre laga sugaayo fulinta balan qaadka uu sameeyay, maadaama Somaliya aysan jirin masuuliyiin xilal dowladeed haaya oo maxkamad loo soo taagay, iyadoo lagu eedeynaayo inay ku kaceen falal musuq maasuq ah.
Inta badan waxaa dhacda xubnaha masuuliyiinta ah ee ku kaca falalka musuq maasuqa ah in aanan laga qaadin tallaabo sharciga waafaqsan oo ay ku qancaan bulshada Somaliyed ee xaqooda la lunsanaayo.
Ra’iisal Wasaare Khayre ayaa iminka ku guda jira la tashiyada ku aadan soo dhisida Xukuumadda cusub ee Somaliya oo iminka si weyn indhaha loogu haayo.